ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): 2009
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:12 AM0comments Links to this post
El Buda enseñó que no hay ningún centro esencial o permanenteaun ser
viviente que podría ser considerado el verdadero ego de uno o alma. Lo que
parece ser una persona individual realmente es un proceso cambiante de reserva mental y las calidades físicas que combinan temporalmente de una manera particular. A través de la atadura posesiva, la mente identifica con parte o todo este proceso y esto da lugar al sentido de ego, 'yo' y 'mío.' De hecho, se surgen todos los fenómenos, animado o inanimado, dependientemente de las causas y condiciones. En un estado constante de flujo, todas las cosas están vacías de existencia inherente independiente y la integridad de realidad es un flujo continuo de interconectó, causalmente los eventos condicionado levantándose y falleciendo sin embargo en el Renacimiento del momento presente, todavía ocurre sin una alma. Considere el símil de una vela que quema bajo y sobre salir.
Una nueva vela se enciende entonces del viejo. Aunque la vela vieja sale, la nueva vela quema ahora brillantemente. ¿Qué cruzó la vela vieja al nuevo? Había un eslabón causal, pero ningún 'cosa' fue Semejantemente por, había un eslabón causal entre uno es pasado y la vida presente, pero ninguna alma fue por.
El Buda enseñó que precisamente es esta equivocación profunda, la ilusión de un ego que es la causa de la raíz de todo el sufrimiento humano. La ilusión de mismos manifiestos como el ego y la función imparable natural del ego es controlar. Los egos grandes quieren controlar el mundo, los medio egos intentan controlar sus ambientes inmediatos de casa, la familia y lugar de trabajo y todo los egos se esfuerzan por controlar lo que asumen para ser sus propios cuerpos y mentes. Este esfuerzo por controlar llevaala atracción y aversión que por consiguiente proliferan para adquirir las posesiones, manipula otros y se aprovecha del ambiente.
Aunque el sentido de ego busca su propia felicidad, su deseo insaciable produce el descontento repetidamente. Con tal de que uno identifique con somethings comoasí mismo, el resultado inevitable es una falta de armonía exterior o el cumplimiento interno. Sóloatravés de marcada visión basada en meditación profunda enlate este espejismo se vea claramente para lo que es de verdad. Sólo entonces pueda que uno sabe felicidad perfecta.
ယောဂီသူတော်စင်တွေအားလုံး ‘ ပျင်း ’ ရင် ‘ ဖျင်း ’ မယ်။ ဖျင်းရင် မသိနားမလည်သူ ( ဗာလ ) လူမိုက်ဖြစ်မယ်။ လူမိုက်ဖြစ်ရင် ဘေးတွေ့ မယ်။ ဘေးတွေ့ တော့ ( မရဏ ) သေမယ်။ သေရင် ယမမင်းကြီးက ငရဲပို့ လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ပ ဖ ဗ ဘ မ ယ ရ ဆိုတဲ့ အက္ခရာ ( ၇ ) လုံးကို အမြဲတမ်း သတိပြုရမယ်။
အိမ်ဦးခန်းမှာ တရားမှတ်ရင်းနဲ့ထိနမိဒ္ဓ၀င်လာခဲ့သည်ရှိသော် နှုတ်ကနေတရားတွေရွတ်လိုက်၊ သညာပြောင်း ပေးပြီးမှ တရားပြန်မှတ်၊ နှာသီးဖျားမှာ ၀င်လေ တိုးထိတာသိ၊ ထွက်လေ တိုးထိတာသိ၊ အဲဒီနှစ်ချက်ကို မှတ်ဆက် အောင် လိုက်ကြည့်ရမယ်။
အကုသိုလ် နဲ့ကုသိုလ်
အကုသိုလ်ဟာ ကျောက်ခဲနဲ့ တူတယ်။ ကုသိုလ်ဟာ ထောပတ်၊ ဆီနဲ့ တူတယ်။ ကျောက်ခဲတို့မည်သည် အောက်ကိုသာနစ်မြုပ်တတ်သလို အကုသိုလ်ဟာလည်း အပါယ်လေးပါးဆိုတဲ့ အောက်သံသရာမှာသာ နစ်မြုပ်တတ်တယ်။ ထောပတ်၊ ဆီတို့ သည် ရေပေါ်သို့ သာတက်လာကြသလို ကုသိုလ်ပါရမီတွေဟာလည်း လူ နတ် နိဗ္ဗာန် ( ၃ ) တန်ချမ်းသာဆိုတဲ့ အထက်သုဂတိဋ္ဌာန တွေသို့ရောက်စေနိုင်၊ ရစေနိုင်တယ်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:51 AM0comments Links to this post
ဓမ္မဒူတ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ ဟောကြားတော်မူသော တရားတော်များ
ဓမ္မဒူတ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ
(၁၅-၁၂-၀၉) မှ (၁၇-၁၂-၀၉) ထိ ကျင်းပအပ်သော
( ၂၅-၃၅ ) လူလတ်တရားစခန်းတွင် ဟောကြားတော်မူသော
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:51 AM0comments Links to this post
Labels: Ashin Cekeida, Dhamma Talks (Audio)
ဖျင်းညံ့သဘော စိတ်ဓာတ်ဟော၏။ စိတ်ဓာတ်လွင့်စင် ဖျင်းညံ့ဝင်၏။ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင် ဖျင်းညံ့စင်၏။ လောကအရေး သူဋ္ဌေးဖြစ်လိုသူတိုင်းနှင့် ဓမ္မအရေး အရိယာဖြစ်လိုသူတိုင်း စိတ်ဓာတ်မကျပါစေနှင့်၊ စိတ်ဓာတ်တင်ထားပါ၊ စိတ်ဓာတ်မြှင့်ထားပါ။
အကြင်သူသည် အိပ်ပျော်၍နေ၏။ အလကား နေ၏။ အလုပ်မလုပ်ဘဲ နေ၏။ ထိုသူ၏ ဘုန်းကံပါရမီ အကျိုးပေးတွေသည်လည်း အကျိုးပေးရန် လွဲချော်၍ နေကြလေကုန်၏ ။
လောကီရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လောကုတ္တရာရေးမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင် မိမိလုပ်ကိုင်ရမည့် လုပ်ငန်းအားလုံးကို ပြီးစီးအောင် ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်။ ၀ီရိယရှိသူအတွက် မအောင်မြင်နိုင်သောအရာ မရှိနိုင်ဘူး။ အားလုံးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:37 AM0comments Links to this post
Budismo s un no-theistic la religión en ese uno no se rinde cultoaun Dios, creador o Progreso del salvador en el camino budista al esclarecimiento no es dependiente en una fuerza externa pero en el propio esfuerzo de uno. La cosmología budista reconoce la existencia de reinos celestiales y los seres divinos que viven hay muy similaraqué personas asociaría con dioses o Dios. Sin embargo, debidoala ley fundamental de temporalidad estos seres están incluso sujetoafallecer y ser renazca, todavía cogió por el ciclo de nacimiento y muerte y por consiguiente no tomado como un último refugio.
Cultivating good-will (metta) gives another dimension to the practice of Insight. Meditation naturally teaches patience and tolerance, or least it shows the importance of these qualities. So you may well wish to developamore friendly and caring attitude towards yourself and other people. In meditation, you can cultivate goodwill very realistically.
Focus attention on the breath, which you will now be using as the means of spreading kindness and good-will. Begin with yourself, with your body. Visualise the breath asalight, or see your awareness as beingawarm ray, and gradually sweep it over your body. Lightly focus your attention on the centre of the chest, around the heart region. As you breathe in, direct patient kindness towards yourself, perhaps with the thought, 'May I be well', or 'Peace'. As you breathe out, let the mood of that thought, or the awareness of light, spread outwards from the heart, through the body, through the mind, and beyond yourself. 'May others be well'.
If you are experiencing negative states of mind, breathe in the qualities of tolerance and forgiveness. Visualising the breath as havingahealing colour may be helpful. On the out-breath, let go-of any stress, worry or negativity - and extend the sense of release through the body, the mind, and beyond, as before.
This practice can form all or part ofaperiod of meditation - you have to judge for yourself what is appropriate. The calming effect of meditating withakindly attitude is good for beginningasitting, but there will no doubt be times to use this approach for periods, to go deeply into the heart.
Always begin with what you are aware of, even if it seems trivial or confused. Let your rest calmly on that - whether it's boredom, an aching knee, or the frustration of not feeling particularly kindly. Allow these to be; practise being at peace with them. Recognise and gently put aside any tendencies towards laziness, doubt or guilt.
INTRODUCTION TO INSIGHT MEDITATION (FROM 1 TO 4)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:20 AM0comments Links to this post
ပဲနွယ်ကုန်း ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ စန္ဒာဝရ
စတုရာရက္ခ ဘာဝနာ (၄)မျိုး ပွားများရန်
၁။ အရဟံစသား ဂုဏ်ကိုးပါးနှင့်
၂။ အားလုံးသတ္တ၀ါ ဘေးရန်ကွာ
၄။ ငါသည်မုချ တစ်နေ့ ကျ
ငါ၏ရုပ်နာမ် ဘုရားထံ အပ်နှံလှူဒါန်းပါ၏ ဘုရား။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 11:04 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Notes, Pe Nwe Kone Sayadaw
Sayadaw U Jotika will be givingapublic talk on Tuesday January 12th 2010 at Bodhgaya Hall.
Sayadaw U Jotika is well known in Bangkok, and has been an inspiration for thousands worldwide. Several books of his are available (and can be obtained at the dhamma talk in January) such as Map of the Journey, and Snow in the Summer, as well as the newest one My Mind is My Friend.
Previously living in the US Sayadaw is known worldwide, and hugely respected. He has excellent English, though the talk on the 12th will be translated into Thai also. Don’t miss this event if you can at all take the time off on Tuesday!!. Also, we expect the hall to be filled to capacity, so arrive well in time to be sure ofaseat. It is very easy to get to, being close to Chit Lom BTS STation (see below for maps/directions)
With Sayadaw U Jotika
‘Eight Worldly Winds’
at Bodhgaya Hall, Amarin Tower
Event is free of charge, and no need for advance booking (be early to ensureaseat though)
See here for previous blogs on Sayadaw’s talks in Bangkok, including an MP3 of his previous talk
Ven. Jotika visited Melbourne in 1977 and again in 1998. He was in the United States in 1983-84 for about (16) months, conducting Dhamma talks in Santa Cruz, New York, Boston and Washington. He had visited Singapore several times on Dhamma Duta missions as well.
He has establishedamonastery inarural environment overlookingagreat lake near Pago, (50) miles north of Yangon. His Dhamma talks and books are in great demand in Myanmar as well as with overseas Burmese. He has published about (13) titles so far. One of his popular Dhamma book in English is “Snow in the Summer”
Or you can click the images below for an aerial view, oraskytrain map
(Little Bang မှ ထပ်ဆင့်ကူးယူဖြန့် ဝေပါသည်။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:57 AM0comments Links to this post
လောကမှာ ပုဂ္ဂိုလ် နှစ်မျိုးရှိတယ်၊ တစ်မျိုးက အဆိုးမြင်သမား၊ နောက်တစ်မျိုးက အကောင်း မြင်သမား။
အဆိုးမြင်သမားက မြင်သမျှ ကြားသမျှကို အဆိုးဘက်ကချည်း ရှုမြင်သုံးသပ်တယ်။ ကောင်းတာလေး ရှိတာကိုတောင်မှ လျှော့ပေါ့စဉ်းစားတယ် ၊ တစ်ဘက်က သူတစ်ပါးကို အဆိုးမြင် သလောက် မိမိဘက်ကျတော့ အကောင်းမြင်တတ်တယ်။ သူတစ်ပါး ဘယ်လောက်တော်တော် ငါ့လောက် မတော်သေးပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ် ရှိနေပါတယ်။ ဒါကို စာက ပရ၀မ္ဘန အတ္တုက္ကံသန လို့ ခေါ်တယ်။ သူတစ်ပါးကို အပြစ်မြင် အကောင်းမထင်တဲ့ သူရဲ့ရင်ထဲမှာ ဘာတွေ ရှိနေမယ်ဆိုတာ စဉ်းစား ကြည့်ပါ။ ငါဆိုတဲ့ အတ္တ ၊ ထောင်လွှားတဲ့ မာန၊ အပြစ်ကို ရှုမြင်တဲ့ ဒေါသတရားတွေ ကိန်းနေမှာ အမှန်ပဲ။
အတ္တ၊ မာန ၊ ဒေါသ တရားတွေ လွှမ်းမိုးနေရင် သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်း အကုသိုလ် စေတသိတ် တွေ အင်နဲ့ အားနဲ့ အလုံးအရင်း တပ်ချီစွဲတော့မယ်။ အတ္တ မာန ဒေါသ တွေဟာ ရှေ့ပြေး ကင်းတွေပဲ။ အဲဒါ သတိရှိဘို့ လိုတယ်။
သူက မြင်သမျှ ကြားသမျှ တွေ့ ထိခံစား သမျှကို ကောင်းတဲ့ဘက် ဆွဲယူ တွေးတောတယ်။ မကောင်းတာတွေ အမှားတွေ တွေ့နေတာ တောင်မှ ခွင့်လွှတ် သည်းခံတတ်တယ်။ ဖြည့်ပြီးမြင်တတ်၊ တွေးတတ်တယ်၊ သူ့ရဲ့ သန္တာန်မှာ မိမိကိုယ်ကို ချီးပင့်တတ်တဲ့ အတ္တုက္ကံသန၊ သူတစ်ပါးကို ရှုတ်ချတတ် တဲ့ ပရ၀မ္ဘန မရှိဘူး။
ခွင့်လွတ် သည်းခံတယ်၊ကောင်းတဲ့ဘက်ကို ဖြည့်ပြီးမြင်တယ်၊ တွေးတယ်ဆိုတာ ဘာစိတ်လဲ၊ အဒေါသစိတ်၊ မေတ္တာစိတ်၊ သူ့သန္တာန်မှာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိတယ်။ ဒီတော့ ကုသိုလ်ဖြစ်မလား ၊ အကုသိုလ်ဖြစ်မလား၊ တွေးကြည့် သိသာတယ်။
ဒီလို ခွင့်လွှတ်သည်းခံတတ်လို့ မေတ္တာထားလို့ ကိုယ်ချင်းစာလို့ သူ့ကို လူပျော့ လူညံ့လို့ မထင်နဲ့ ၊ အကောင်း အဆိုး သူသိနေတယ်။ လူပျော့ လူညံ့က ဘာမှ မသိတာ။ မောဟသမား။ သူများ ပြောတိုင်း ခေါင်းညိမ့်ပြီး နောက်ယောင်ခံနေတာ၊ ကောင်း ဆိုး နှစ်တန် မဝေဘန်နိုင်တာ။
ကဏန်း၊ ပုတ်သင်၊ ကိုင်းပင်၊ လိပ်မျိုး၊ နွားသိုး၊ ခွေးအ၊ ဤခြောက်ဝ အနာယက ဂုဏ်အင်္ဂါ ဆိုတဲ့ အထဲမှာ ပုတ်သင်လို ခေါင်းညိမ့်ပြီး၊ ကိုင်းပင်လို ယိမ်းတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်မျိုး။ အဆိုးမြင် အပြစ်မြင်တတ်သူရဲ့ ရှေ့ရေးကို တွေးကြည့်၊ ကောင်းစရာ မရှိဘူး။ အတ္တ၊ မာန၊ ဒေါသတွေ လွှမ်းနေတယ်။
မဝေဘန် မပိုင်းခြားနိုင်သူကကော၊ မောဟ ဖိစီးခံရသူ။ ဒီတော့ စေတနာ ဟံ ဘိက္ခဝေ ကမ္မံ ၀ဒါမိ လို့ ဘုရားဟောတယ် မဟုတ်လား။ ကောင်းစေတနာ မဟုတ်တော့ ကောင်းကံတွေ မလာတော့ ဘူးပေါ့။
ကောင်း ဆိုး နှစ်တန်ကို သိတယ်။ အပြစ် မမြင်၊ အပြစ် မတင်တတ်ဘဲ ခွင့်လွှတ်တတ်၊ ဖြည့် မြင်တတ်သူက အဒေါသ သမား၊ အကောင်းမြင်ဝါဒ ရှိသူ။
ထိုပုဂ္ဂိုလ် မိမိ ကိုယ်နှင့် နှိုင်းစာကြည့်တယ်၊ မိမိကိုယ်ကို ပြန်သုံးသပ်တယ်၊ အရေးကြီးတာက အဲဒါပဲ။ ငါဘယ်လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲ ဆိုတာ သိဘို့ လိုတယ်။ ငါဟာ ရဟန်းလား၊ သာမဏေလား၊ အမျိုးသားလား၊ အမျိုးသမီးလား၊ ဆရာလား၊ တပည့်လား စသည်ပေါ့။
မိမိကိုယ်ကို သတိရှိနေရင် အမှားအယွင်းသိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ရဟန်းဟာ ရဟန်းဆိုတဲ့ အသိ ရှိရင်၊ သာသနာ စိတ်ရှိတယ်လို့ ခေါ်တယ်။ ရဟန်းဖြစ်ပြီး ရဟန်းအသိမှ မရှိရင် ကျန်တာတွေ အတူတူ ဖြစ်သွားမယ်။ ရဟန်းဟာ ရဟန်း သတိ၊ အမျိုးသမီးဟာ အမျိုးသမီး ဆိုတဲ့ သတိရှိမှ ကောင်းတာ။
ပရ၀ဇ္ဇာနုပဿိဿ၊ နိစ္စံ ဥဇ္ဈာနသညိနော။
အာသ၀ါ တဿ ၀ဎန္တိ ၊ အာရာ သော အာသ၀က္ခယာ ။
သူတစ်ပါးကို အပြစ်မရှာပါနဲ့၊ မိမိကိုယ်ကို ဆင်ခြင်ပါ။ သူတစ်ပါး အပြစ် ရှာတတ်သူဟာ နိဗ္ဗာန် မပြောနဲ့ ပစ္စက္ခမှာပင် ဆုတ်ယုတ်တယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်းမြင်သမား ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြပါစို့ လို့ သြ၀ါဒစကား မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။
(တပည့်တော်အား တွေ့ တိုင်း ကရုဏာစေတနာဖြင့် အမြဲတမ်း ဆူဆဲဆုံးမတတ်တဲ့ ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်များကို အာရုံပြုကြည်ညိုရင်း ဤအဆုံးအမစာစုကို မေတ္တာဥယျာဉ် ဆိုဒ်မှ ထပ်ဆင့်ကူးယူ ပူဇော်ဖော်ပြပါသည်။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 12:01 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Notes, ကန်ဦးဇေတ၀န်ဆရာတော်, စိတ်ကူးပုံရိပ် စာစုများ
နံနက်(၆)နာရီတွင် အိမ်မှထွက်ခဲ့ကြသည်။ အမေပြန်မည့်နေ့ မို့လေယာဉ်ကွင်းသို့စောစော ထွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်၏။ လေယာဉ်သုံးစီး ရှေ့ ဆင့်နောက်ဆင့် ထွက်ကြမည်ဖြစ်သဖြင့် လေယာဉ် ကွင်းတွင် ခရီးသည်များ ပစ္စည်းများနှင့် လိုက်ပို့ ကြသူများ ကြက်ပျံမကျ စည်ကားလျက်ရှိ၏။ ကောင်တာတွင်နေစရာမရှိအောင် ပစ္စည်းများ လူများဖြင့် ရှုတ်ရှက်ခက်နေသဖြင့် ကျမသည် ခုံလွတ်တစ်နေရာတွင် ဝင်ထိုင်ကာ စာဖတ်နေမိသည်။ ဒေါ်ကြီးတစ်ယောက်လုံး ရှိနေသဖြင့် ပစ္စည်းချိန်ရန် ကျမမှာ စိတ်ချနေ၏။
အမေပြန်သွားပြီး သုံးလေးရက်ကြာလျင် မောင်လေးဆီကို အမေ့စာရောက်လာသည်။ ကျမသည် ဝတ္တရားမကျေကြောင်း၊ လေယာဉ်ကွင်းတွင် သူ့ ကိုလျစ်လျှူရှုပြီး စာအုပ်သာတွင်တွင်ဖတ်နေ ကြောင်း မကျေမနပ်စာရေးလာသည်။ အမေ့အမြင်ကတော့ ဟုတ်ပေလိမ့်မည်။ သို့ သော်... ကျမက တမင်တကာ လျစ်လျူရှုသည်တော့မဟုတ်။
လူ့ စိတ်သဘာဝသည် အပြင်လောကတွင် အလွန်ကျက်စားလိုသည်။ အမှန်တော့ ကျမအမေ သည် သူ၏စိတ်ချမ်းသာမှု လုံခြုံမှုကု သမီးဖြစ်သူကျမဆီက ရှာနေခြင်းပင်ဖြစ်၏။ သူများဆီကရ သော စိတ်ချမ်းသာမှုသည် ရသည့်အခါရ၍ မရသည့်အခါမရ ဖြစ်တတ်သဖြင့် မရသည့်အခါတွင် အကြီးအကျယ် စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်လေသည်။ ဟိုသူက ဝတ္တရားမကျေတာ၊ သည်သူကတာဝန်မသိတာ စသည်ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုချည်း အပြစ်မြင်လေသည်။
ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်း အမေ့ဆီတွင် လုံခြုံမှုကိုရှာခဲ့သည်။ ရသည့်အခါရသလို မရသည့်အခါမရခဲ့ပါ။ အမေ မကျေနပ်သလို ကျမလည်း မကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အမေ့တွင်သာမက ပတ်ဝန်းကျင် အနှံ့ ကိုလည်း ကိုးကွယ်ရာရှာခဲ့ပါသည်။
ကျမတွင် ရှေ့ သိနောက်သိ သိနိုင်သော အဒေါ်တစ်ယောက်ရှိပါသည်။ သူနှင့်တွေ့ ရလျင် ကျမအလွန်စိတ်ချမ်းသာသည်။ ကျမကိုလည်း နားလည်သည်ကတစ်ကြောင်း ကျမသိလိုသော ရှေ့ ဖြစ်နောက်ဖြစ်များကိုလည်း သူ့ ကိုမေးနိုင်သည်ကတစ်ကြောင်း ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ သူ့ကိုမေးရသည်မှာ ကြာတော့ အားမရဖြစ်လာသည်။ ကျမတွင်လည်း ဤသတ္တိမျိုး ရှိလာနိုင်သည် ဟုပြောသည်။ သို့ ဖြင့်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရှာခဲ့သည်။ တွေ့ သင့်သလောက်တော့ တွေ့ ခဲ့သည်။ သို့ သော် မလိုလားအပ်သော စိတ်အလေ့အကျင့်များ ပါလာပြန်သည်။ ဒွိဟစိတ်များနှင့် မိမိစိတ် ကိုမိမိ ဆုံးမဖြတ်နိုင်သော မလုံခြုံမှုများပင်ဖြစ်၏။ ကြာတော့မဖြစ်ချေဟူ၍ သည်ဘက်ကို လက်လွှတ်လိုက်ရသည်။
တခါ မိတ်ဆွေများထံတွင် လုံခြုံမှုကိုရှာမိပြန်သည်။ အမေ့ဆီကမရသော လုံခြုံမှုကို အမေနှင့်အမ နှင့်တူသော လူများဆီကရလေမလားဟု မျှော်လင့်မိသည်။ အမေ့လိုပင် ရသည့်အခါရ၍ မရ သည့်အခါမရသည်ကို တွေ့ လာရပြန်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုးတွင် ရှာမှုအမျိုးမျိုးဖြင့်ရှာခဲ့ သည်။ ဘယ်နေရာရှာရှာ တွေ့ သည်ကတစ်မျိုးတည်းပင်။ (ရသည့်အခါရ၍ မရသည့်အခါ မရ)။ သို့ ကြောင့် အသိတစ်ခုတော့ရလာသည်။ (ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုသည်မှာ မိမိအချိန်ပြည့် စိတ်အားကိုး ၍မရ။ မိမိကိုယ်တိုင်က ပတ်ဝန်းကျင်ကို အချိန်ပြည့် အားကိုးမှုမပေးနိုင်သလို ပတ်ဝန်းကျင်က လည်း မိမိကို အချိန်ပြည့် လုံခြုံမှု စိတ်ချမ်းသာမှု မပေးနိုင်ဆိုသော အသိပင်ဖြစ်၏။)
နောက်ဆုံးရှာစရာ တစ်နေရာသာကျန်တော့သည်။ တရားဓမ္မသာ ကိုးကွယ်ရာဟု ဆိုစမြဲအတိုင်း တရားဓမ္မ၌ ကိုးကွယ်ရာရှာရန် အားထုတ်ခဲ့သည်။ စာပေကျမ်းဂန်များ သင်ဆရာမြင်ဆရာများဆီ မှ လေ့လာဆည်းပူးခဲ့သည်။ ကိုယ်တိုင်လည်းအနည်းအကျဉ်း တရားအားထုတ်ခြင်းပြုခဲ့သည်။ အားထုတ်သည့်အချိန် လေ့လာနေသည့်အချိန်တွင်တော့ ငြိမ်းချမ်းမှုကို အတော်ကလေးရသည်။ သို့ သော်...လောကဓံနှင့် ရင်ဆိုင်တိုးမိတိုင်း တိုးမိတိုင်း ရှာထားသောတရားများသည်လည်း ဘယ်ဆီရောက်ကုန်မှန်းမသိတော့။ လမ်းကုန်နေသဖြင့် နောက်ဆုံးလုပ်စရာ တစ်ခုသာကျန်တော့ သည်။
အမှန်တော့ ကျမဟာ အင်မတန်နုံတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်နုံမှန်း အခုမှဘဲ သိတော့တယ်။ ပညာတွေတတ်ပြီး တရားကလေးဘာလေး နည်းနည်းပါးပါးသိတာနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဟုတ်လှပြီ အောင်းမေ့နေတာ။ အခြောက်တိုက် ဘဝင်မြင့်နေတာ။ တကယ်စင်စစ်တော့ ကျမဟာ သူတောင်းစားနှင့် ဘာမှမခြားခဲ့ပါဘူး။ သူများဆီလိုက်ပြီး စိတ်ချမ်းသာမှုပေးကမ်းကြပါ၊ ဝေငှကြပါလို့လိုက်တောင်းနေတာနှင့် အတူတူဘဲ။ တရားကိုလည်း ဒီလိုဘဲ သွားတောင်းတာဘဲ။ အမှန်တော့ တရားဟာ တရားဘဲ။ စိတ်ချမ်းသာမှုမှ မဟုတ်ဘဲ။ တရားမှာသွားတောင်းရင် တရားဘဲရမှာပေါ့။ စိတ်ချမ်းသာမှုတော့ ဘယ်ရပါ့မလဲ။ ဒါကို အခု ကျမ သဘောပေါက်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ကျမစိတ်ကိုကျမ ဒုန်းဒုန်းချလိုက်ပြီ။
ယခု ကျမ ကိုးကွယ်ရာ စိတ်ချမ်းသာစရာ ရပါပြီ။ ဘယ်လိုရသလဲ။ ဘယ်တုန်းကရသလဲလို့မေးလျင် တစ်ခွန်းဘဲ ဖြေစရာရှိပါသည်။
ကျမ ကိုးကွယ်ရာ စိတ်ချမ်းသာရာကို မရှာတော့တဲ့နေ့ က စပြီး ကိုးကွယ်ရာ စိတ်ချမ်းသာရာ ရတာဘဲ။ ယခုကျမ သူတောင်းစား မဟုတ်တော့ပါဘူး။
၁၉၇၈ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:08 AM4comments Links to this post
Labels: Dr. Daw Thynn Thynn, Zen
Reclining at the end ofaday, spendafew minutes meditating while lying on one side. Keep the body quite straight and bend one arm up so that the hand acts asasupport for the head. Sweep through the body, resting its stresses; or collect your attention on the breath, consciously putting aside memories of the day just past and expectations of tomorrow. Inafew minutes, with your mind clear, you'll able to rest well.
INTRODUCTION TO INSIGHT MEDITATION (FROM 1 TO 3)
El Buda recordó sus vidas pasadas. Hay hoy incluso monjes, monjas y otros que pueden recordar sus existencias anteriores. Tal una memoria fuerte es un resultado de meditación profunda y el entrenamiento mental. Para aquéllos que pueden revocar sus vidas pasadas, la idea de renacimiento se vuelve un hecho establecido que pone esta vida presente en una perspectiva significante.
La ley de kamma sólo puede entenderse totalmente en el armazón de muchos
vidas, porqueaveces toma este largo para el kamma producir su fruta.
El renacimiento no está meramente limitado al reino humano. El Buda enseñó que el reino de seres humanos es pero uno entre muchos. Hay reinos de cielos, infiernos, animales y fantasmas además. Dependiendo del kamma uno ha aumentado, uno puede ser renazca en cualquiera de éstos. Entendiendo esto plantea un sentido de empatía y respeta para las vidas de todos los seres.
Porque ningún reino es permanente, el ciclo repetitivo de nacimiento y muerte y el vagar en del reino al reino es inherentemente el unsatisfying. En el futuro uno busca una manera. Siguiendo el Camino Ocho veces Nobleasu culminación de esclarecimiento, el proceso de cesaciones del renacimiento completamente.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:54 AM0comments Links to this post
တရား - စကား - အလကား
တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာ အဖော်မမှီး တစ်ကိုယ်တည်း ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ကျင့်ဆောင်ရတယ်၊ တစ်ယောက် တရား၊ နှစ်ယောက် စကား၊ သုံးယောက် အလကား၊ ဒီစကားကို အမြဲတမ်း မှတ်ထားရမယ်။
ဒီလို မဖြစ်ကြစေနဲ့ 
ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေ အားလုံး လိုချင်တာကနိဗ္ဗာန်၊ လုပ်နေတာက မနိပ်ပြန်။ ပြောတော့ တရား၊ လုပ်နေတာက မတရား၊ ဒီလို မဖြစ်ကြစေနဲ့ ။
တရားတွေ့ ဖို့ ရာ
တစ်ယောက်တည်းနေ၊ ဆိပ်ငြိမ်ရာ ချဉ်းကပ်၊ သတိလက်ကိုင်ထား၊ နိဗ္ဗာန်သို့ စိတ်ကို ညွတ်ပြီး ဇွဲကောင်းကောင်း နဲ့ကြိုစားကြမယ်ဆိုရင် ယောဂီတွေ အားလုံး တရားတွေ့ ကြပါလိမ့်မယ်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 9:57 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:05 AM0comments Links to this post
ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး၏ ပကိဏ္ဏက နမက္ကာရ ဘုရားရှိခိုးကြီး
(အမ မသစ္စာအလင်း (www.thitsaralin.com) ၏ ဓမ္မဒါနကို ထပ်ဆင့်မျှဝေပါသည်။)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 2:40 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Ebooks
၀ိပဿနာဘုံသွား ဉာဏ်လှေခါးကျမ်း (သံလျင်တောရ ဓမ္မ၀ါဒီဆရာတော်)
၀ိပဿနာဘုံသွား - ဉာဏ်လှေခါးကျမ်း
၁။ ဉာဏ်တော်သခင်၊ ဘုရားရှင်၊ ဦးတင်ညွတ်တွားပေ၊
၂။ ယောဂီအများ၊ ဉာဏ်လှေခါး၊ ထိပ်ဖျားတက်နိုင်စေ၊
၃။ ကိလေသာယုတ်၊ ဉာဏ်ဒါးခုတ်၊ ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းအောင်ချွေ၊
၄။ ဖြစ်-ပျက် ၂ ဖြာ၊ ချုပ်ဆုံးရာ၊ ပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ပေ၊
၅။ နိဗ္ဗာနဓာတ်၊ ဧငြိမ်းရပ်၊ ဖိုလ်ကပ်ပျော်နိုင်စေ။
လိုရာအဆင့်သို့ ဖြစ်စေ၊ အမြင့်သို့ ဖြစ်စေ၊ တက်ရောက်နိုင်ရန် အသုံးပြုကြသော နင်းစရာ အထစ်-အဆစ်-အဖု-အခွက်-အထုံး စသည် တခုခုကို ”လှေခါး” ဟု ခေါ်ကြသည်။
ဤလှေခါး၏အသုံးမှာ အမြင့်ခရီးအတွက် အားပြုသွားစရာ ဓမ္မတာလက်နက် တမျိုးပင်ဖြစ်တော့သည်။ မည်သူမဆို အမြင့်တက်ချင်လျင် လှေခါးတမျိုးမျိုးကို မရှောင်သာ သုံးစွဲနေကြရတော့သည်။ ယင်းလှေခါးတမျိုးမျိုးမပါဘဲ အမြင့်သို့ တက်နိုင်သည်ဟု ထုံးစံမရှိတော့ပေ။
အမြင့်သို့ တက်ရန် အသုံးပြုကြသော လှေခါးတို့ မှာ အမျိုးမျိုးရှိနေကြသည်။ ၄င်းတို့ ကား -
၁။ ၀ါး-သစ်သား-သံ-ကြိုး စသော လှေခါးတမျိုး
၂။ ငုတ်-အဖု-အထစ်-ချိုင့်စသော လှေခါးတမျိုး
၃။ လျှပ်စစ်ဓါတ်လှေခါး တမျိုး၊
၄။ ငွေ-ရွှေစသော ရတနာ လှေခါး တမျိုး၊
၅။ လူလှေခါး၊ စကားလှေခါး၊ စိတ်လှေခါး တမျိုး၊
၆။ ရေ လှေခါး၊ လေ လှေခါး၊ စက်လှေခါး တမျိုး၊
၇။ အလေ့အကျင့် လှေခါး တမျိုး၊
၈။ ကံ လှေခါး၊ ပါရမီ လှေခါး တမျိုး၊
၉။ ဈာန် လှေခါး၊ ဉာဏ်လှေခါး တမျိုး ဟု လိုရာအမြင့်နှင့် အဆင့်သို့ လည်းကောင်း ခရီးသို့ လည်းကောင်း ရောက်နိုင်ရန် တွယ်စရာ၊ နင်းစရာ လှေခါးအမျိုးမျိုး ရှိနေကြသည်။
၁။ အိမ်၊ ကျောင်း စသည်တို့ ၌ သစ်သားလှေခါး၊ သံလှေခါးတို့ နှင့် တက်ကြသည်။
၂။ ထန်းပင်၊ ဘုရားရွှေချ စသည်တို့ ၌ ကြိုး၊ ၀ါး၊ ငြမ်းလှေခါးတို့ နှင့် တက်ကြသည်။
၃။ တောင် နံရံ၊ သစ်ပင်ကြီး စသည်တို့ ၌ ငုတ်-အဖု-အထစ်-ချိုင့် စသော လှေခါးမျိုးဖြင့် တက်ကြသည်။
၄။ ဆေးရုံနှင့် မြင့်သော အဆောက်အအုံကြီးတို့ ၌ လျှပ်စစ်လှေခါးမျိုးဖြင့် တက်ကြသည်။
၅။ စီးပွားမှု၊ ရောင်းဝယ်မှု စသည်တို့ ၌ ငွေ၊ ရွှေစသော ရတနာလှေခါးမျိုးဖြင့် တက်ကြသည်။
၆။ အုပ်ချုပ်ရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လွန်ဆွဲရေး-ပွဲကရေး စသည်တို့ ၌ လူလှေခါးမျိုးနှင့် တက်ကြသည်။
၇။ နှုတ်ရည်ပြိုင်ပွဲပြမှု၊ ၂ ပြည်ထောင် စာချုပ်မှု၊ ရှေ့ နေရှေ့ ရပ်လုပ်မှု၊ စသော အမှုမျိုးတို့ ၌ နှုတ်လှေခါးမျိုးနှင့် တက်ကြသည်။
၈။ တခုခုဖန်တီးရန် တွေးတောမှု၊ ကြံဆမှုများ၌ စိတ်လှေခါးမျိုးဖြင့် တက်ကြသည်။
၉။ လှေ-သမ္ဗန်စသည်တို့ ဖြင့် ရှေ့ သို့ တိုးတက်စေရာတို့ ၌ ရေလှေခါး လေ လှေခါးမျိုးဖြင့် တက်ကြသည်။
၁၀။ ကား-ရထား-သင်္ဘော-လေယာဉ်ပျံ-ဒုံးပျံစသည်တို့ ဖြင့် တိုးတက်ကြရာ၌ စက်လှေခါးဖြင့် တက်ကြသည်။
၁၁။ အသားဆိုင်ထွားကြိုင်းမှု၊ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်မှု၊ ကြိုးတန်းပေါ်လျှောက်နိုင်မှု၊ ဘီးတစ်ခုတည်းရှိ စက်ဘီးမျိုးစီးပြနိုင်မှု စသည်တို့ မှာ အလေ့အကျင့်လှေခါးမျိုးဖြင့် တက်ကြသည်။
၁၂။ အမျိုးမြင့်မြတ်မှု၊ အဆင်းလှမှု၊ အသံသာယာမှု၊ ဗလအမျိုးမျိုး ပြည့်စုံမှုတို့ မှာ ကံလှေခါးမျိုးဖြင့် တက်ကြသည်။
၁၃။ စကြာမင်းအဖြစ်၊ စကြာဒေ၀ီအဖြစ်၊ လက်ဝဲရာမ် အဖြစ်၊ လက်ျာရာမ်အဖြစ်၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါအဖြစ်၊ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်တို့ သို့တက်ရောက်ကြရာမှာ ပါရမီလှေခါးမျိုးဖြင့် တက်ကြသည်။
၁၄။ ကောင်းကင်ပျံနိုင်မှု၊ မြေလျှိုးနိုင်မှု စသည်တို့ မှာ ဈာန်လှေခါး၊ အဘိညာဏ်လှေခါးမျိုးဖြင့် တက်ကြသည်။
၁၅။ အသိမှန်ရမှု ရုပ်လောက၊ နာမ်လောကတို့ ကို ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်မှု၊ လောကနယ်ကို အစုံအလင်သိမှု- လောကုတ္တရာနယ်ကို အစုံအလင်သိမှုရနိုင်ရေးမှာ ဉာဏ်လှေခါးမျိုးဖြင့်သာ တက်ကြသည်။ ယခုအသုံးပြုမည့် လှေခါးမှာလည်း ဉာဏ်လှေခါး မျိုးသာ ဖြစ်တော့သည်။
ဉာဏ်အမျိုးမျိုး၊ ဉာဏ်စခန်းအမျိုးမျိုး၊ ဉာဏ်နှင့်တက်လှမ်းရသော အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိပြန်၍ ဉာဏ်လှေခါးတို့ မှာလည်း အမျိုးမျိုးပင် ရှိနေကြပြန်သည်။ ၄င်းတို့ မှာ-
၁။ ပရိယတ္တိနယ်သို့တက်လှမ်းသော ဉာဏ်လှေခါးမျိုး
၂။ ဒါနကထာနှင့်စပ်သော ဉာဏ်လှေခါးမျိုး
၃။ သီလကထာနှင့်စပ်သော ဉာဏ်လှေခါးမျိုး
၄။ သဂ္ဂကထာနှင့်စပ်သော ဉာဏ်လှေခါးမျိုး
၅။ ကာမာဒီန၀ကထာနှင့် စပ်သော ဉာဏ်လှေခါးမျိုး၊
၆။ မဂ္ဂကထာနှင့်စပ်သော ဉာဏ်လှေခါးမျိုး၊
၇။ စိန္တာမယဉာဏ်နှင့်စပ်သော ဉာဏ်လှေခါးမျိုး၊
၈။ သုတမယဉာဏ်နှင့်စပ်သော ဉာဏ်လှေခါးမျိုး၊
၉။ ဘာဝနာမယဉာဏ်နှင့်စပ်သော ဉာဏ်လှေခါးမျိုး၊
၁၀။ ဈာန်အဆင့်ဆင့်တက်လှမ်းသော ဉာဏ်လှေခါးမျိုး၊
၁၁။ အသိဉာဏ်အဆင့်ဆင့်တက်လှမ်းသော ဉာဏ်လှေခါးမျိုး၊
၁၂။ ပစ္စဝေက္ခဏာ ဉာဏ်လှေခါးမျိုး၊
၁၃။ သမာပတ္တိဉာဏ်လှေခါးမျိုး စသည်ဖြင့် များစွာရှိနေရာ ဤနေရာအတွက် (သာဝက-သာဓာရဏ ဉာဏ်လှေခါး ၆၇မျိုး) ထဲမှ ခွဲထုတ်၍ ပြပါအံ့။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:23 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Articles, သံလျင်တောရ
A quiet room with not much in it to distract the mind is ideal;asetting with light and space hasabrightening and clearing effect, whileacluttered and gloomy room has just the opposite. Timing is also important, particularly as most people's days are quite structured with routines. It is not especially productive to meditate when you have something else to do, or when you're pressed for time. It's better to set asideaperiod - say, in the early morning or in the evening after work -when you can really give your full attention to the practice. Begin with fifteen minutes or so. Practice sincerely with the limitations of time and available energy, and avoid becoming mechanical about the routine. Meditation practice, supported by genuine willingness to investigate and make peace with oneself, will develop naturally in terms of duration and skill.
Useaposture that will keep your back straight without strain. A simple upright chair may be helpful, or you may be able to use one of the lotus postures. (Illustrations and notes on posture are given at the back of this booklet.) These look awkward at first, but in time they provideaunique balance of gentle firmness that gladdens the mind without tiring the body.
If the chin is tilted very slightly down this will help, but do not allow the head to loll forward as this encourages drowsiness. Place the hands on your lap, palms upward, one gently resting on the other with the thumb-tips touching. Take your time, and get the right balance.
Now, collect your attention, and begin to move it slowly down your body. Notice the sensations. Relax any tensions, particularly in the face, neck, and hands. Allow the eyelids to close or half close.
Investigate how you are feeling. Expectant or tense? Then relax your attentionalittle. With this, the mind will probably calm down, and you may find some thoughts drifting in - reflections, daydreams, memories, or doubts about whether you are doing it right! Instead of following or contending with these thought patterns, bring more attention to the body, which isauseful anchor forawandering mind.
Cultivateaspirit of inquiry in your meditation attitude. Take your time. Move your attention, for example, systematically from the crown of the head down over the whole body. Notice the different sensations- such as warmth, pulsing, numbness, and sensitivity - in the joints of each finger, the moisture of the palms, and the pulse in the wrist. Even areas that may have no particular sensation, such as the forearms or the earlobes, can be 'swept over' in an attentive way. Notice how even the lack of sensation is something the mind can be aware of. This constant and sustained investigation is called mindfulness (sati) and is one of the primary tools of Insight Meditation.
Instead of 'body sweeping', or afterapreliminary period of this practice, mindfulness can be developed through attention on the breath.
First, follow the sensation of your ordinary breath as it flows in through the nostrils and fills the chest and abdomen. Then try maintaining your attention at one point, either at the diaphragm or -amore refined location - at the nostrils Breath hasatranquilising quality, steady and relaxing if you don't force it; this is helped by an upright posture. Your mind may wander, but keep patiently returning to the breath.
It is not necessary to develop concentration to the point of excluding everything else except the breath. Rather than to createatrance, the purpose here is to allow you to notice the workings of the mind, and to bringameasure of peaceful clarity into it. The entire process-gathering your attention, noticing the breath, noticing that the mind has wandered, and re-establishing your attention -develops mindfulness, patience, and insightful understanding. So don't be put off by apparent 'failure' - simply begin again. Continuing in this way allows the mind to eventually calm down.
If you get very restless or agitated, just relax. Practice being at peace with yourself, listening to - without necessarily believing in - the voices of the mind.
If you feel drowsy, then put more care and attention into your body and posture. Refining your attention or pursuing tranquility at such times will only make matters worse!
INTRODUCTION TO INSIGHT MEDITATION 1
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:46 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 7:16 AM0comments Links to this post
The purpose of Insight Meditation is not to createasystem of beliefs, but rather to give guidance on how to see clearly into the nature of the mind. In this way one gains first-hand understanding of the way things are, without reliance on opinions or theories -adirect experience, which has its own vitality. It also gives rise to the sense of deep calm that comes from knowing something for oneself, beyond any doubt.
The term 'Insight Meditation' (samatha-vipassana)* refers to practices for the mind that develop calm (samatha) through sustained attention, and insight (vipassana) through reflection. A fundamental technique for sustaining attention is focusing awareness on the body; traditionally, this is practised while sitting or walking. The guide begins with some advice on this.
Reflection occurs quite naturally afterwards, when one is 'comfortable' within the context of the meditation exercise. There will beasense of ease and interest, and one begins to look around and become acquainted with the mind that is meditating. This 'looking around' is called contemplation,apersonal and direct seeing that can only be suggested by any technique. A few ideas and guidance on this come inalater section.
* Knowledge of terms in Pali - the canonical language of Theravada Buddhism - is not necessary to begin the practice of meditation. It can be useful, however, to provide reference points to the large source of guidance in the Theravada Canon, as well as to the teaching of many contemporary masters who still find such words more precise than their English equivalents.
Copyright by Amaravati Publications 1988
မသစ္စာအလင်း (www.thitsaralin.com) မှ ကျွန်တော့်ထံသို့ဓမ္မဒါန လက်ဆောင်ပေးတဲ့ စာအုပ်လေးကို စိတ်ဝင်စားသူများ အားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထပ်ဆင့်ဝေမျှ ဒါနပြုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 6:59 AM0comments Links to this post
A martial arts student approached his teacher withaquestion. "I'd like to improve my knowledge of the martial arts. In addition to learning from you, I'd like to study with another teacher in order to learn another style. What do you think of this idea?" "The hunter who chases two rabbits," answered the master, "catches neither one."
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:34 AM0comments Links to this post
Posted by The Bliss Of Emancipation at 8:23 AM0comments Links to this post
ယောဂီသူတော်စင်တွေအားလုံး အလင်းကနေ အလင်းသွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်အောင် ကျင့်ဆောင် အားထုတ်ရမယ်။ ၀ိပဿနာတရားကို ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အို နာ သေ ဇာတ်အမြစ်ပြတ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်အလင်းဓာတ်ကြီးကို သေချာပေါက် ရောက်နိုင်တယ်။
ယောနိသောမနသိကာရ ( နှလုံးသွင်း မှန်ကန်စွာ ) နဲ့ ခန္ဓာဥာဏ်စိုက်ပြီးတော့ မှတ်နိုင်မှ၊ မှတ်တတ်မှ၊ မှတ်နေမှသာ အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေ မြင်တော်မူ ရတော်မူတဲ့ တရားထူး၊ တရားမြတ်တွေကို
ယောဂီသူတော်စင်တွေအားလုံး တရားရချင်ရင် သစ္စာနှင့် ပတ်သက်သော တရားကိုနာကြားရမယ်။ နောက်ပြီးတော့ ခန္ဓာဥာဏ်စိုက်ပြီးတော့ ရှုမှတ်ပွားများရမယ်။ ဒါဆိုရင် တရားရနိုင်တယ်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:01 AM0comments Links to this post
ကျွန်ုပ်တွေ့ သော စိတ်သဘာဝ (၃)
ဤတစ်ပတ်တွင် စိတ်သဘောအကြောင်း မဖော်ပြမီ ကျွန်ုပ်ထံသို့ရေးသားမေးမြန်းကြသော ပုစ္ဆာများကို ရှေးဦးစွာ ဖြေဆိုရပေဦးမည်။
၄င်းတို့ မှာ (၁) ၀တ္ထုရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာတစ်ယောက်မျှသာဖြစ်ပါလျက် မည်သည်ကို အကြောင်းပြု၍ တရားဘက်သို့လိုက်စားခဲ့ပါသနည်း။ (၂) လူတိုင်းအားထုတ်၍ ဖြစ်နိုင်ပါသလော။ ပါရမီရင့်ကျက်မှ ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုလျင်၊ ပါရမီရင့်မရင့်ကို ဘယ်နည်းနှင့် သိနိုင်ပါသနည်းဟူသော ပုစ္ဆာများပင် ဖြစ်သည်။
(၁) နံပါတ်ပုစ္ဆာကို ဖြေဆိုရသော် ကျွန်ုပ်မှာ ၀တ္ထုသမား၊ သတင်းစာသမားတစ်ယောက် ဖြစ်ရုံသာမက၊ ခပ်ပျော်ပျော်နေချင်တတ်သူတစ်ယောက်ဟူ၍ပင် လူအများ နားလည်ကြသည်။ မှန်လည်း မှန်ပေသည်။ သို့ ရာတွင် ကျွန်ုပ်မျိုးရိုးဇာတိ၌ ထူးခြားသောအချက်များရှိသည်ကို ဖော်ပြရပေအုံးမည်။
မဂ်တရား ဖိုလ်တရားသည် ဤခေတ်လူများနှင့်မဆိုင်၊ မဂ်ဖိုလ်ရနိုင်သော ခေတ်မရှိတော့ဟူ၍ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးက ယူဆခဲ့ကြသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀ ခန့် က ကျွန်ုပ်အား ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ အပ်နှံစဉ်က ကျွန်ုပ်၏ဆရာတော်ဘုရားမှာ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်ဟု မိဘများနှင့်တကွ တပည့်တပန်း အနည်းငယ်တို့ က ယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်မှာလည်း မိဘများ ယုံကြည်၍ ယုံကြည်ခဲ့သည်။ သို့ သော် အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဟူသည်မှာ နိဗ္ဗာန်ကူးတော့မည့် ပုဂ္ဂိုလ် ဆိုခြင်းမှတစ်ပါး နိဗ္ဗာန်ကိုလည်း နားမလည်၊ လိုချင်ရကောင်းမှန်းလည်း မသိခဲ့ချေ။ ပုဂ္ဂိုလ်အနေဖြင့်ကား လေးလေးစားစား ကြည်ညိုခဲ့သည်။ ကြည်ညိုဖွယ်အချက်များလည်း အမြောက်အမြားရှိသည်။
ထို့ နောက် အင်္ဂလိပ်ကျောင်းသို့ ကူးပြောင်း၍ ပညာသင်ပြီးသဖြင့် လူလားမြောက်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်၏ဖခင်မှာ ဓမ္မကထိကတစ်ဦးဖြစ်သည့်အတိုင်း ညတိုင်းလိုပင် တပည့်များအား (ဆရာတော်ဘုရား၏ သြ၀ါဒအရ) တရားဟောပြောခြင်းများကို နာကြားရသည်။ တစ်ညသ၌ ကျွန်ုပ်၏ စိတ်ထဲတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသည်မှာကား ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း နိဗ္ဗာန်ကို အထွတ်အမြတ်ထား၍ ပြောကြသည်။ တိတိကျကျမူကား မည်သူမျှ သိပုံမရ။ ငါသည် ဆရာတော်၏ တပည့်၊ ဤမိဘနှစ်ပါးတို့ ၏ သားဖြစ်ပါလျက် နိဗ္ဗာန်ကို မရလျင် ရာဇ၀င်ရိုင်းလိမ့်မည်။ တစ်နေ့ သော် နိဗ္ဗာန်ကို သိအောင် ကြိုးစားမည်ဟု သန္နိဋ္ဌာန်ချလိုက်သည်။ အမှန်ဆိုရလျင် ထိုအချိန်၌ ကျွန်ုပ်သည် နိဗ္ဗာန်ကို လိုချင်သော ဆန္ဒလည်း မရှိလှ။ ထူးမြတ်လှသည်ဟူ၍ သိချင်သော ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းမျှသာ ဖြစ်သည်။ (ကျွန်ုပ်၏ ၀ါသနာတစ်ခုမှာလည်း သူတစ်ပါးကောင်း၍ မကောင်းချင်တတ်။ ကိုယ်တိုင် “မြဲ” ကြည့်ပြီး ကောင်းသည်ဟုတွေ့ မှ ၀န်ခံချင်တတ်သည်။)
ကိုစိုးဝင်းထွဋ် (www.trueanswer.co.cc)(www.dhammabooks.co.cc) ၏ ဓမ္မဒါန စာအုပ်အလှူကို အထောက်အပံ့ ပြုလိုပါသဖြင့် ဤ ဒိဋ္ဌေဒိဋ္ဌမတ္တံ ကို အချိန်ပေးပြီး ကြိုးစားတင်ပေးသွားပါမည် ခင်ဗျား။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 1:07 PM0comments Links to this post
La Media Manera
El camino al fin de todo el sufrimiento se llama la Media Manera porque evita los dos extremos de mismo-indulgencia y mismo-tormento. El tal comportamiento extremo no llevaapaz de mente. Esta senda consiste en cultivar virtud, serenidad meditativa y sabiduría y se elabora más allá como el Camino Ocho veces Noble:
1. La perfección de entender: vista del derecho de las verdades básicas de existencia.
2. La perfección de intención: pensamientos motivados por amoroso-bondad, compasión y renuncia.
3. La perfección de discurso: verdadero, armonioso, manso y significante.
4. La perfección de comportamiento: no-violencia, no robando y la conducta sexual responsable. 5. La perfección de empleo: ganándose la vida eso en cierto modo no daña o hazaña otros oasí mismo.
6. La perfección de esfuerzo: cultivar y mantener estados sanos de mente mientras superando los estados insalubres y manteniéndolosaraya.
7. La perfección de conocimiento consciente: mindfulness de unos el cuerpo, sentimientos, mente y objetos de mente.
8. La perfección de concentración meditativa: unificación profunda, paz y pureza de mente.
Cuando se traen todos los ocho factores del caminoamadurez, uno penetra la verdadera naturaleza de existencia con visión y siega la fruta de las enseñanzas del Buda: sabiduría perfeccionada y la liberación inquebrantable.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 12:57 PM0comments Links to this post
ယောဂီသူတော်စင်တွေဟာ အချိန်တွေဆက်သမျှ အရှိန်မပျက်ဒလစပ်ရှုမှတ်နေကြမယ်ဆိုရင် ရုပ်နာမ်တွေကွဲ၊
ကြောင်းကျိုးတွေသိလို့သမ္ပဇာဉ်အဆင့်ဆင့် ဥာဏ်စဉ်တွေ မြင့်ပြီးတော့ ငြိမ်းအေးတဲ့ ဓမ္မအရသာတွေ ကိုယ်စီကိုယ်စီ ခံစားကြရလိမ့်မယ်။
ရုပ်နဲ့ နာမ်နဲ့ကွဲအောင် ရှုမှတ်နိုင်ရင် သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်မယ်။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်မှလည်း အောက်သံသရာ လို့ ခေါ်ဆိုရတဲ့ အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်နိုင်မယ်။
ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီသူတော်စင်တွေဟာ မှတ်နည်းသိလို့ ၊ မှတ်နိုင်လို့ ၊ မှတ်တတ်လို့ ၊ မှတ်အား ကောင်းလာလို့ ရှိရင် ဥပဒယခေါ်တဲ့ အဖြစ်နဲ့ ၊ ၀ယ-ဆိုတဲ့ အပျက်ကို မြင်မယ်။ ဥာဏ်ထဲမှာ ထင်မြင်လာမယ်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 12:50 PM0comments Links to this post
( မေး )
ဆရာတော်ဘုရား၊ ဗုဒ္ဓဂုဏော အနန္တော -စတဲ့ အနန္တော အနန္တ ငါးပါးပါရှိတဲ့ ပါဠိ၊ အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာကို သိလိုပါသည်ဘုရား။
( သောမာလင်္ကာရ-ရွှေဘို )
အနန္တငါးပါးနှင့်စပ်၍ သတ္တကာယော စ အာကာသော-စသည်ဖြင့် သတ္တ၀ါ အနန္တ၊ စကြ၀ဠာအနန္တ နှင့် ဗုဒ္ဓဉာဏ်တော် အနန္တ အကြောင်းကို ဗုဒ္ဓ၀င်ပါဠိတော် ( ခု-၄၊ ၃၀၅ ) တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
သို့သော်လည်း ဗုဒ္ဓဂုဏော အနန္တော၊ ဓမ္မ၊ သံဃ၊ မာတာပိတု နှင့် အာစရိယဂုဏော အနန္တော-ဟူသော အနန္တငါးပါးမှာ ငါးပါးစု၍ တနေရာတည်း၌ မည်သည့်ပါဠိ၊ အဋ္ဌကထာမှာမှ မတွေ့နိုင်ပါ။ ရှိပါသည်ဟူ၍လည်း ဆရာတော်အရှင်မြတ်တို့ ညွှန်ပြချက်မရှိပါ။
သို့သော် အပ္ပမာဏော ဗုဒ္ဓေါ-စသော ပါဠိတော်များ၊
ဗဟုပကာရာ ဘိက္ခဝေ မာတာပိတရော-စသော ပါဠိတော်များနှင့် အာစရိယ ဆရာသမားတို့ကြောင့် အပါယ်တံခါးများပိတ်၍ သုဂတိတံခါးများ ပွင့်ကာ နိဗ္ဗာန်လမ်း ပေါက်ရောက်စေနိုင်ကြောင်း၊ တရားတော်များကို အမှီပြု၍ ဉာဏ်ပညာ ကြီးမားတော်မူကုန်သော ရှေးဆရာကြီးများက အနန္တငါးပါးကို စီစဉ်ထားရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဖော်ပြပါ သတ္တ၀ါအနန္တ စသော အနန္တ ငါးပါးနှင့် ကွဲရန် ဤဗုဒ္ဓဂုဏော အနန္တော စသည်ကို အနန္တော အနန္တ ငါးပါး-ဟု ဝေါဟာရ ပြုခဲ့ကြပါသည်။
မင်္ဂလာသတင်းစဉ် (http://mawluu.blogspot.com/2009/03/blog-post_3075.html) မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
(မေး ) ( ရတနာသုံးပါး၊ ငါးပါး )
အရှင်ဘုရား၊ ရတနာသုံးပါးဟူ၍ ကြားဖူးပါသည်၊ ဆိုရိုးလည်း ရှိပါသည်၊ သို့သော် မိဘနှင့် ဆရာသမားတို့သည် ဘုရားနှင့်တဂိုဏ်းတည်း အနန္တဂိုဏ်းဝင် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ သို့ပါလျက် အဘယ်ကြောင့် ရတနာငါးပါးဟု မဆိုဘဲ ရတနာသုံးပါးဟုသာ ဆိုရပါသလဲဘုရား။
( လှတင်-ကညင်မြိုင်-ရမ်းဗြဲ )
ရတနတ္တယံ၊ ၀တ္ထုတ္တယံ စသည်ဖြင့် ရတနာသည် ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ဤသုံးဖြာသာဖြစ်သဖြင့် ရတနာသုံးပါးဟု ဆိုပါသည်။ ဤသုံးပါးမှတပါး အခြား မြတ်သောရတနာ မရှိပါ။ မိဘနှင့် ဆရာသမားတို့မှာ ဂုဏ်ကျေးဇူးကြီးမားသူများဖြစ်၍ အနန္တဂိုဏ်းဝင်အဖြစ် အမှတ်ထား၍ ဘုရားနှင့်ဂုဏ်ကျေးဇူး တူတန်ကြောင်း ဆိုပါသည်။ ရတနာအဖြစ် မဆိုပါ။ အနန္တောအနန္တ ငါးပါးဟုသာ သတ်မှတ်သည်။ ရတနာငါးပါးဟု သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ။ ဤသို့ ခွဲခြားမှတ်သားသင့်ကြောင်း ပြောလိုပါသည်။
( မြတ်မင်္ဂလာ ၁၉၉၈-ခု မတ်လ )
ဘဒ္ဒန္တ တိလောကသာရ ဖြေသည်။
ဓမ္မာစရိယဦးအေးနိုင် (ဘီအေ) ဖြေသည်။
dar ta nyan ရဲ့ CBox မှာ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းအတွက် လက်လှမ်းမီရာကနေ ရှာဖွေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘယ်ခေတ်ကစပြီး မိဘနှင့်ဆရာကို ထည့်တယ်ဆိုတာတော့ မတွေ့ မိသေးပါဘူး။ တကယ်လို့ များ စာလာဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေများထဲက သိတဲ့သူရှိရင်လည်း ပြောပြပေးသွားဖို့လေးစားစွာဖြင့် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 10:27 AM0comments Links to this post
အချိန်ရှိခိုက် လုံ့ လစိုက်
ရခဲလှသော လူ့ ဘ၀ကြီးတွင် ကြုံ ခဲလှသော သာသနာတော်ကြီးနှင့် တွေ့ ကြုံတုန်း အဖိုးတန်သော သူတော်ကောင်း ဥစ္စာ( ၇ )ပါးကို ရအောင်ကြိုးစား အားထုတ်ရမယ်။
ယောဂီသူတော်စင်တွေအားလုံး သက္ကာယဒိဋ္ဌိ နှောင်ကြိုးကြီးချည်နှောင်ခံထားရတဲ့အပြင် တဏှာရေလျဉ် ကြောမှာ မျောနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ရင်တော့ အို နာ သေရေး ဒုက္ခဘေးတို့ မှ လွတ်မြောက် နိုင်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။
သက္ကာယဒိဋ္ဌိ နဲ့အပါယ်လေးပါး
သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး လူ့ ဘ၀တွင် စကြာမင်း၊ နတ်ဘ၀တွင် သိကြားမင်း၊ ဗြဟ္မာမင်း ဖြစ်နေသော်လည်း ငရဲ တိရစ္ဆာန် ပြိတ္တာ အသူရကာယ် ဆိုတဲ့ အပါယ်လေးပါးက မလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘူး။
La enseñanza central del Buda alrededor del que todas sus otras enseñanzas revuelven, es las Cuatro Verdades Nobles:
1. La vida envuelve el sufrimiento. Todos los seres están sujetoala vejez, enfermedad y muerte. Experimentarán alguna desilusión, incomodidad, tristeza, ansiedad o dolor inevitablemente.
2. La causa de la raíz de sufrir está pidiendo para el placer sensual, para existencia, para no-existencia o para las cosas ser diferente que son. Pidiendo se alimenta por gusta y detesta, manejado por la ilusión de 'yo' y 'mío', qué esasu vez debidoaentender mal la verdadera naturaleza de realidad.
3. Fines sufridos con el fin de pedir. Éste es el logro de esclarecimiento, Nibbana (o Nirvana). El esclarecimiento es el permitiendo completo va de la ilusión de un ego permanenteeindependiente o alma. Una persona ilustrada se llama un Arahant.
4. El esclarecimiento se lograatravés de un entrenamiento gradual, un camino llamó la Media Manera o el Camino Ocho
Budismo es una religión realista en eso enfrenta hasta el hecho de vida muchos imperfecciones y optimista en eso ofrece una solución práctica: esclarecimiento en esta misma vida.
Porque todas las cosas que se levantan de una causa están en un estado constante de cambio, son inherentemente incapaces proporcionar felicidad permanente o la satisfacción fiable. Asiendo y aferrándose hacia cualquier aspecto de primacías de experienciaala fricción, tensión o desilusión cuando esas cosas, las personas o situaciones se marchitan y desaparecen. Con tal de que sufriendo se vea como algo antinatural o anormal eso será temido, se evitará o se rechazará, será imposible de desarraigar sus causas y vivir una vida verdaderamente feliz. Al grado que la naturaleza sutil y todo-penetrante de sufrir se reconoce, uno puede aceptar y puede ser libre de él. Esto es por qué la reflexión en sufrir se da énfasisacomo la llaveala última liberación, y ésos que han comprendido el esclarecimiento son ejemplos inspiradores de felicidad profunda, amoroso-bondad y compasión.
Posted by The Bliss Of Emancipation at 1:20 AM0comments Links to this post
ဓမ္မကထိကဗဟုဇနဟိတဓရ သာသနဓဇ ဓမ္မာစရိယ
ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ (မဟာစည်)
သက်တော် ၆၈- နှစ်၊ သိက္ခာတော် ၄၉- ဝါ
၂၀၀၉- ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၄- ရက် နံနက် ၇- နာရီ ပျံလွန်တော်မူသည်။
ဆရာတော် ဟောကြားတော်မူခဲ့သော နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်များ
၁။ အမြတ်ဆုံးပူဇော်ဖွယ်၊ ၁၂.၁၄.၁၉၉၃
၂။ မီးလောင်ပြင်မှာပွင့်တဲ့ပန်း- ၁။
၃။ မီးလောင်ပြင်မှာပွင့်တဲ့ပန်း- ၂။
၄။ လှသောည၏စကားအလင်္ကာ- ၁၊ ၁၁.၉.၁၉၈၃
၅။ လှသောည၏စကားအလင်္ကာ- ၂၊ ၁၁.၉.၁၉၈၃
၆။ နတ်တို့တန်းတလူ့ဘဝ- ၁၊ ၁၂.၁၄.၁၉၉၇
၇။ နတ်တို့တန်းတလူ့ဘဝ- ၂၊ ၁၂.၁၄.၁၉၉၇
၈။ ဖိတ်ခေါ်ပါသည် အိုယောဂီ- ၁၊ ၃.၅.၁၉၉၉
၉။ ဖိတ်ခေါ်ပါသည် အိုယောဂီ- ၂၊ ၃.၅.၁၉၉၉
၁ဝ။ စံပြကုသိုလ်ရှင်သူလိုဖြစ်စေချင်- ၁၊ ၁၂.၁၆.၁၉၉၈
၁၁။ စံပြကုသိုလ်ရှင်သူလိုဖြစ်စေချင်- ၂၊ ၁၂.၁၆.၁၉၉၈
၁၂။ အမေ့ကျေးဇူးမကျေ ငါမသေဘူး- ၁၊ ၈.၃ဝ.၁၉၉၈
၁၃။ အမေ့ကျေးဇူးမကျေ ငါမသေဘူး- ၂၊ ၈.၃ဝ.၁၉၉၈
၁၄။ မွေးနေ့မှသည် နိဗ္ဗာန်ပြည်၊ ၁၂.၁၆.၁၉၉၃
၁၅။ ဝိပဿနာအကျိုးချစ်မြတ်နိုး၊ ၁၂.၁၃.၁၉၉၁
၁၆။ အရှေ့ကနေဝန်းထွက်သည့်ပမာ၊ ၁၂.၁၇.၁၉၉၃
၁၇။ သာဓုသုတ္တံ ကောင်းမှကောင်း- ၁။
၁၈။ သာဓုသုတ္တံ ကောင်းမှကောင်း- ၂။
၁၉။ ဘေးလွတ်ရာသွားအိုလူသား- ၁၊ ၁၁.၂၇.၁၉၉၂
၂၀။ ဘေးလွတ်ရာသွားအိုလူသား- ၂၊ ၁၁.၂၇.၁၉၉၂
၂၁။ သွေးနဲ့ရေးတဲ့သာသနာ- ၁၊ ၁၂.၂၂.၁၉၉၄
၂၂။ သွေးနဲ့ရေးတဲ့သာသနာ- ၂၊ ၁၂.၂၂.၁၉၉၄
၂၃။ ရတနာထိုက်တဲ့ချစ်သမီး- ၁၊ ၁၂.၅.၁၉၉၇
၂၄။ ရတနာထိုက်တဲ့ချစ်သမီး- ၂၊ ၁၂.၅.၁၉၉၇
၂၅။ စာအံသံကြားတရားရ- ၁၊ ၁၂.၂၁.၁၉၉၇
၂၆။ စာအံသံကြားတရားရ- ၂၊ ၁၂.၂၁.၁၉၉၇
၂၇။ ကာမသုတ္တန် တရားတော်- ၁၊ ၂ဝဝဝ
၂၈။ ကာမသုတ္တန် တရားတော်- ၂၊ ၂ဝဝဝ
၂၉။ အသက်သေသော်လည်း မျက်ရည်မကျစတမ်း- ၁၊ ၁၂.ဝ၆.၁၉၉၈
၃၀။ အသက်သေသော်လည်း မျက်ရည်မကျစတမ်း- ၂၊ ၁၂.ဝ၆.၁၉၉၈
၃၁။ ပါဝေယျကဆင် တိုက်ပွဲဝင်၊ ၂၂.၁၂.၁၉၇၈
၃၂။ ဘယ်ကုသိုလ် အမြတ်ဆုံးပါလိမ့်၊ ၁၈.၁၂.၁၉၈၃
၃၃။ ဘေးလွတ်ရာသွား အိုလူသား၊ ၁၂.၁၂.၁၉၉၂
၃၄။ သံဃဂုဏပကာသကသုတ္တန်၊ ၂ဝ.၅.၁၉၉၃
၃၅။ မဟာသတိပဋ္ဌာန် တရားတော်၊ ၂၃.၁၂.၁၉၉၄
၃၆။ ရင်မှာစွဲရမည့် ပုလဲရတနာ၊ ၉.၁၂.၁၉၉၅
၃၇။ ခရီးသွား ခရီးနား၊ ၂၈.၁၂.၁၉၉၆
၃၈။ ကောင်းမှကောင်း၊ ၁၅.၁၂.၁၉၉၈
၃၉။ အဖြူနဲ့အမဲ တမူကွဲတရား၊ ၉.၈.၁၉၉၉
၄ဝ။ လူငါးယောက်နှင့် ကြီးလေးကြီး၊ ၁၉.၁၁.၁၉၉၉
တရားနာပြီး တရားအတိုင်း ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေ
မကြာမီ တပည့်တော်လည်း လိုက်လာခဲ့ပါမည်...
မအိုချင်လို ငါကဆိုလည်း ဆိုတိုင်းမရ အနတ္တခန္ဓာကိုယ်...
မနာချင်လို ငါကဆိုလည်း ဆိုတိုင်းမရ အနတ္တခန္ဓာကိုယ်...
မသေချင်လို ငါကဆိုလည်း ဆိုတိုင်းမရ အနတ္တခန္ဓာကိုယ်...
ဘုန်းဘုန်း ဦးလောကနာထ ၏ ဒဿနခရီးစဉ် (http://www.lknt11.com ) မှ ထပ်ဆင့်ကူးယူမျှဝေ၍ ဓမ္မဒါနပြုပါသည်။
Posted by The Bliss Of Emancipation at 12:58 AM0comments Links to this post
Labels: Dhamma Talks (Audio), Phyu Sayadaw